शौचालयमा लडेर घाइते भएका कांग्रेस नेता खड्काको निधन
नेपाली कांग्रेसका नेता शिवबहादुर खड्काको आइतबार राजधानीमा निधन भएको छ। पछिल्लो समय मध्यपुरथिमिमा बस्दै आएका तत्कालीन संविधानसभा सदस्य खड्का घरको शौचालयमा लडेर घाइते भएपछि गठ्ठाघरस्थित नागरिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो।
सेतोपाटी4दिन पहिले
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता, संविधानसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति रामेछापका पूर्वसभापति शिवबहादुर खड्काको आज निधन भएको छ। भक्तपुरको गठ्ठाघरस्थित नागरिक अस्पतालमा उनको निधन भएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। १९९७ सालमा जन्मिएका स्वर्गीय खड्काले कांग्रेसको संगठन निर्माण र लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
Dekhapadhi4दिन पहिले
कोरोना संक्रमणबाट संविधानसभा सदस्य चौधरीको निधन
कैलाली / कैलालीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट तत्कालीन संविधानसभा सदस्य रबनी चौधरीको निधन भएको छ । धनगढीस्थित नवजीवन अस्पतालमा उपचाररत चौधरीको आज अपराह्न मृत्यु भएको हो । कलेजो र मिर्गौला रोगले पीडित चौधरीलाई शनिबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । कोरोना परीक्षण गराउँदा रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । एक्कासि स्वास्थ्यमा देखिएको गम्भीर समस्याका कारण उहाँको निधन भएको... The post कोरोना संक्रमणबाट संविधानसभा सदस्य चौधरीको निधन appeared first on Purbeli News.
Purbeli News4दिन पहिले
१९ वैशाख, धनगढी । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणबाट संविधानसभा सदस्य रबनी चौधरीको निधन भएको छ । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–६ बागमारा स्थायी ठेगाना भएकी ४४ वर्षीया चौधरीको कोरोना संक्रमणबाट आइतबार दिउँसो धनगढीमा निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । कलेजो र मिर्गौलासम्बन्धी समस्याले ग्रस्त चौधरी धनगढीको नवजीवन अस्पतालमा उपचाररत थिइन् । शनिबार मात्र अस्पताल भर्ना भएकी […]
कैलाली : कैलालीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट संविधानसभा सदस्य रबनी चौधरीको निधन भएको छ। कलेजो र मिर्गौला सम्बन्धी समस्याको उपचारका लागि उनी कैलालीको धनगढीस्थित नवजीवन अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन्। सोही क्रममा उनको कोरोना परीक्षण गर्दा आइतबार रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो। आइतबारै उपचारका क्रममा स्वास्थ्यमा एकासी समस्या आएर दिउँसो निधन भएको उनको…
पहिलो पोस्ट4दिन पहिले
कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं संविधानसभा सदस्य शिवबहादुर खड्काको आइतबार निधन भएको छ ।
कान्तिपुर4दिन पहिले
संविधानसभा सदस्य मोहम्मदी सिद्दिकीको निधन
काठमाण्डाै - संविधानसभा सदस्य मोहम्मदी सिद्दिकीको निधन भएको छ । कोरोना सङ्क्रमण भएपछि गएको चैत २८ गतेदेखि भेरी अस्पतालमा उपचाररत उहाँको गएराति निधन भएको हो । नेपालगञ्ज-३ की ६५ वर्षीया सिद्दिकी २०७० सालमा भएको संविधानसभा चुनावमा नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सभासद हुनुभएको हो । मुस्लिम तथा मधेसी समुदायमा शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै अधिकारका क्षेत्रमा उहाँ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो ।
कोरोना संक्रमणबाट बाँकेमा थप पाँच जनाको मृत्यु
काठमाडौं : कोरोनाको हटस्पट बनेको बाँकेमा पछिल्लो १२ घन्टायता मात्रै ५ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्ज–३ की संविधानसभा सदस्य ६२ वर्षीया मोहम्मद सिद्दिकीको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। उनी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य थिइन्। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सिद्धिकी गत चैत २८ गते भेरी अस्पतालको कोभिड आइसोलेशन वार्डमा भर्ना भएकी थिइन्। उपचारको क्रममा उनको गएराति मृत्यु भएको जिल्ला स्वाथ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन तेज बहादुर वलीले जानका
थाहा खबर 12 दिन पहिले
कोरोनाबाट संविधानसभा सदस्य मोहम्मदी सिद्दिकीको निधन
संविधानसभा सदस्य मोहम्मदी सिद्दिकीको शनिबार निधन भएको छ । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालको कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत सिद्दिकीको शनिबार बेलुकी मृत्यु भएको परिवारले जनाएको छ । केही दिनदेखि उनको भेन्टिलेटर सपोर्टसहित उपचार भइरहेको थियो ।...
कोरोना संक्रमणबाट संविधानसभा सदस्य सिद्दीकीको निधन
कोरोना संक्रमणबाट संविधानसभा सदस्य ६५ वर्षीया मोहम्मदी सिद्दीकीको उपचारका क्रममा शनिबार साँझ निधन भएको छ ।बाँकेको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी निरीक्षक ईश्वरी गिरीले जानकारी दिए । गिरीका अनुसार चैत्र २८ गते उनमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन् ।